Iindaba - J.bale Bio : Ukuthelekiswa kweVTM engasebenziyo kunye nengasebenziyo
I-J.bale Bio : Ukuthelekiswa kwe-VTM engasebenziyo kunye nengasebenziyo
Ukuthelekiswa kwee-VTM ezimbini: ingasebenzi kwaye ingasebenzi
I-VTM (imidiya yokuthutha intsholongwane) isetyenziselwa ukuqokelela, ukugcinwa, ukuthuthwa kweesampulu zentsholongwane eqhelekileyo, njengentsholongwane ye-corona, iintsholongwane zomkhuhlane, intsholongwane ye-HFMD, njl. njl. ukusuka emqaleni, iimpumlo swabs okanye ezinye iindawo ezithile, iisampulu ezigciniweyo zingasetyenziselwa imifuniselo elandelayo yeklinikhi ezifana nucleic acid extraction okanye ukuhlanjululwa Ngokuqhelekileyo yahlulwe zibe zimbini iintlobo, enye luhlobo non-inactivated, enokukhusela protein kunye nucleic acid. yentsholongwane, kwaye enye luhlobo olungasebenziyo, oluhlala luqulethe ityuwa ye-lysis eyenza intsholongwane ingasebenzi, eqhekeza iprotheni kwaye ikhusela i-nucleic acid.
1. Isisombululo esingasebenziyo sogcino lwentsholongwane:
I-Nucleic acid yi-biological macromolecular compound eyenziwe yi-polymerization yeenucleotides ezininzi, kuquka i-deoxyribonucleic acid (DNA) kunye ne-ribonucleic acid (RNA). Yenye yezona zinto zisisiseko zobomi. Intsholongwane inesakhiwo esisodwa kwaye iqulethe uhlobo olulodwa lwe-nucleic acid kunye neprotheni. Ngoko ke, intsholongwane ifunyenwe xa i-nucleic acid ifunyenwe. Iintsholongwane zizidalwa ezizifunxi-gazi kwaye azikwazi ukuphila ngaphandle komzimba emva kwesampulu. Ukuba azinakubonwa kwangethuba, kufuneka zibekwe kwisisombululo sogcino lwentsholongwane. Ukuze ukhusele ukhuseleko lwendalo yokufumanisa intsholongwane, kuyimfuneko yokongeza ityuwa ye-lysis ukuze ingasebenzi intsholongwane kwaye ikhulule i-nucleic acid enokuthi ibonwe.
Isisombululo sokugcinwa kwentsholongwane engasebenziyo sisisombululo sokugcinwa kwentsholongwane ye-lysis eguqulwe kwisisombululo se-nucleic acid extraction lysis, esongezwa ngoxinzelelo oluphezulu lwetyuwa ye-lysis, enokuthi ngokukhawuleza kwaye ikhuphe ngokufanelekileyo iprotein yentsholongwane yesampulu ukuba ivavanywe, enokuthintela ngempumelelo. umqhubi Usulelo lwesibini, olukwanalo ne-Rnase enzyme inhibitor, lunokukhusela i-viral nucleic acid ekuthotyweni. Injongo ephambili ye-Tris, ityuwa ye-lysis, i-EDTA, njl. equlethwe kuyo kukucanda i-nucleic acid kunye nokukhulula i-nucleic acid, enokuthi iqhutywe nge-real-time real-time fluorescent RT-PCR Nucleic acid test isetyenziselwa ukumisela. ingaba isampulu iqulethe i-virus-featured nucleic acid, oko kukuthi, nokuba yosulelwe yintsholongwane. Isisombululo sokugcina esingasebenziyo sinokugcinwa kwiqondo lokushisa kwegumbi ixesha elide, ukugcina iindleko zokugcina isampuli yentsholongwane kunye nokuthutha.
Iimpawu zemveliso yesisombululo sogcino lwentsholongwane engasebenziyo:
1. Ukusebenza okulula kunye nokusetyenziswa, akukho mfuneko yokulungiselela ulwelo, inkqubo iqulethe i-lysate ye-virus ephezulu, intsholongwane ingasebenzi ngokukhawuleza emva kwesampuli, ikhusela ngokufanelekileyo umngcipheko wokusuleleka kwesibini, kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lokuthutha kunye nokuvavanya abasebenzi;
2. I-Viral DNA / RNA inokugcinwa kwaye ihanjiswe kwiqondo lokushisa kwi-1 iveki ngaphandle kokuthotywa. Emva kokutsalwa ngokweekiti ezininzi zorhwebo, i-DNA/RNA efunyenweyo ikumgangatho olungileyo kunye nesivuno esikhulu, kwaye inokugqiba uvavanyo lofuzo olwahlukeneyo kunye novavanyo lokuhlalutya. Okufana ne-PCR, qPCR, njl., ngelixa ugcina iindleko zokuhamba;
3. Iqukethe i-RNase inhibitors ukunyusa ukukhuselwa kwe-viral nucleic acid ekuthotyweni kunye nokuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kwe-nucleic acid extraction.
4. Ikulungele ukuqokelela, ukugcinwa kunye nokuthuthwa kweesampuli zentsholongwane eziqhelekileyo ezifana ne-coronavirus entsha, intsholongwane yomkhuhlane, isandla, inyawo kunye nentsholongwane yomlomo. Inokuqokelela i-swabs yomqala kunye ne-swabs yeempumlo okanye iisampulu zezicubu zamalungu athile. Iisampuli ezigciniweyo zingasetyenziselwa iimvavanyo zekliniki ezilandelayo ezifana ne-nucleic acid extraction okanye ukuhlanjululwa.
2. Isisombululo sogcino lwentsholongwane engasetyenziswanga:
Isisombululo sokugcinwa kwentsholongwane esingasebenziyo asinalo ityuwa ye-lysis, kodwa intsholongwane egciniweyo inokunyaniseka okungcono kunye nezinga eliphezulu lokufumanisa. Ikakhulu isekelwe kwisisombululo sokugcinwa kwesisombululo sokugcinwa kwentsholongwane ephuculweyo esekelwe kwindlela yokuhambisa. Ukongeza ekubhaqweni kwe-nucleic acid, ingasetyenziselwa olunye uphando. Lo ugcina idyasi yeprotheyini yentsholongwane kunye ne-DNA okanye i-RNA ye-viral nucleic acid ngaxeshanye, ukuze intsholongwane ibe nengqibelelo yeprotein epitope kunye ne-nucleic acid in vitro. Kakade ke, kukho umngcipheko othile wokosulela xa kusenziwa iimpazamo. Izithako zayo zihlala ziqulathe isiseko solwelo lwe-Hanks, i-gentamicin, i-antibiotics yokungunda, i-BSA (V), i-cryoprotectants, i-biological buffers kunye nee-amino acids, njl. ububanzi. Ukugcinwa kwexesha elide emva kwesampulu kufuneka kugcinwe ubushushu obuphantsi ngokungqongqo.
Iimpawu zemveliso yesisombululo sogcino lwentsholongwane engasetyenziswanga:
1. Ukugcinwa kweqondo eliphantsi lobushushu alonakalisi igobolondo langaphandle lentsholongwane kwaye lilungele ukuthutha umgama omde.
2. Ifanele zonke iintlobo zeesampulu ze-swab, ezibandakanya i-oral swabs, i-nasal swabs, i-throat swabs, njl.
3. Ingasetyenziselwa intsholongwane yomkhuhlane we-H1N1 kunye nazo naziphi na ezinye iintsholongwane ezinokuthi zenziwe isampulu ngeswabs.
4. I-viral nucleic acid inokukhutshwa nge-column virus DNAout okanye i-virus ye-column RNAout.
5. I-antibiotics kwisisombululo sesampuli inokuthintela ngokufanelekileyo ukungcoliswa kwebhaktheriya kunye nefungal.
6. Isisombululo sesampula songezwa nge-albumin ye-bovine serum, enokukhusela isampuli yentsholongwane kunye nokuphucula izinga lokuhlukana.
Inokubonwa ngokuthelekisa kwezi zibini ukuba injongo yoyilo olungasetyenziswanga kukugcina ingqibelelo yeprotheni yentsholongwane, kwaye ukubunjwa kwayo kuyinkimbinkimbi kunohlobo olungasebenziyo, kwaye ixabiso liphezulu kancinci. Ngokubhekiselele kumngcipheko okhulayo wosulelo, akukho mfuneko yakukhathazeka. Ngethuba nje amaziko anokwenza uvavanyo lwe-viral nucleic acid lusemthethweni kwaye lusebenza njengoko lufunwa, akukho ngozi, kwaye akukho meko yokusuleleka kwintsholongwane ebangelwa isisombululo sokugcinwa kwentsholongwane ngumhloli.
Isisombululo sogcino lwentsholongwane esingasebenziyo sineemfuno eziphezulu zovavanyo, kwaye uvakalelo lwaso kufuneka lube phezulu, kwaye kukho izicelo ezininzi. Emva kwayo yonke loo nto, isisombululo sogcino songezwa kwityhubhu yesampulu yentsholongwane yentsholongwane yeenkonzo zokubona intsholongwane, kwaye ayinakuba ngenxa yokungasuki kwayo. Yikhanyele nje, umngcipheko wolawulo lokwenyani kufuneka ulale kwisampulu kunye nokusebenza kovavanyo.
Ixesha lokuposa: Jun-09-2021
I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Buccal Swab Collection Kit, Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml,